Ikhaya Elihle ku-20 Acres, amaminithi ukusuka ku-Glacier NP - I-Airbnb
Ikhaya Elihle ku-20 Acres, amaminithi ukusuka ku-Glacier NP
Columbia Falls, Montana, i-United States
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Annie
Ingabe ufuna indawo engcwele ukuze uqoqele abangani bakho nomndeni wakho noma indawo yokubambela ukuhoxa?
I-Sanctuary Creek e-Meadow Lake izodala umoya wokuphefumula nokuzola wokushajwa kabusha amabhethri akho kanye nokuhlinzeka ngendawo yokweqa ukuze uthole izinkulungwane zeminyaka e-Flathead Valley kanye ne-Glacier National Park.
Ikhaya elibanzi elingamamitha-skwele angama-4400 litholakala kumahektha angama-20 anomfula ocula ngaphansi kwendlu.
Kufakwe nekhishi elikhulu lompheki elineziqongo ze-granite counter-tops kanye nekhabhinethi enhle ifakwe kahle. Ikhishi linendawo yokucima ukoma kanye nezihlalo zebha ukuze uthole izihlalo ezengeziwe. Kukhona indawo yokudlela ehlukile ene-chandelier ethandekayo ephezulu phezulu enama-dimmers, eboleka kahle edilini leqembu kanye nemibuthano. Indawo yokuhlala inendawo yomlilo yegesi yakusihlwa okuthokomele, iminyango yama-french ephumela endaweni enkulu ngaphandle inikeza ukubuka kwenkanyezi kanye ne-BBQ grill.Idekhi inetafula elikhulu le-patio elinezihlalo ezi-6 zokunethezeka okwengeziwe nokuhlala.
Izilwane zasendle kule ndawo azinakuqhathaniswa! Ngenxa yokuba seduze kwamahektare amaningi asendle, kuye kwahlolisiswa ezinemilenze emine yazo zonke izinhlobo lapha - i-elk, amabhubesi asezintabeni, ibhere, i-moose, ne-coyote ukubala ezimbalwa ...
Ezingeni elikhulu kanye nendawo yokuhlala, yokudlela, ikhishi kanye nompheme, kunamagumbi okulala amabili. Enye yinkosi enkulu enombhede wenkosi nezicabha zaseFrance eziphumela emphemeni. Igumbi lokugezela elihle le-en suite elinobhavu omkhulu wokucwiliswa emanzini, kanye neshawa ehlangana naleli kamelo lokulala elinendawo yomlilo yangasese. Lena indawo yomlilo yegesi ezinhlangothi zombili ukuze igumbi lokulala kanye nokugeza kokubili kujabulele i-ambience, imfudumalo, nokunethezeka. Igumbi lokulala lesibili kuleli zinga linombhede wendlovukazi futhi igumbi lokugezela eliphelele elihlanganyelwayo lingaphesheya kwehholo. Igumbi lokuwasha kanye nokungena egaraji lezimoto ezimbili kuphansi nje kwehholo.
Ngezitebhisi noma ngekheshi (sicela usazise uma udinga ukufinyelela kukheshi) igumbi legeyimu eliphansi liyafinyelelwa. Isitofu segesi sinikeza ukunethezeka futhi kukhona netafula legeyimu lamakhadi nemidlalo yebhodi, itafula le-ping pong, nedeski. Ngaphandle kwaleli gumbi legeyimu kukhona igumbi lemidiya elinezihlalo zokubuka umdlalo omkhulu noma imuvi eyintandokazi. Isofa lokudonsa likhona kuleli gumbi ukuze uthole indawo eyengeziwe yokulala.
Kunamagumbi amabili okulala kuleli zinga futhi. Elinye liyigumbi elikhulu elinombhede oyibhinki obekwe phansi nombhede ophindwe kabili futhi owodwa phezulu, kanye nemibhede emibili eyodwa. Igumbi lokulala lesibili kuleli zinga eliphansi linombhede wendlovukazi. Igumbi lokugezela elihlanganyelwe liyatholakala kuleli zinga lamakamelo amabili okulala, igumbi legeyimu kanye negumbi lemidiya.
Ngaphandle kwegumbi legeyimu kukhona ubhavu oshisayo kanye novulandi omboziwe wokuphumula, ngisho naphakathi kwemvula ethambile.
Le ndawo iseMeadow Lake - eduze kwenkundla yegalofu ethandekayo.
Ibanga eliya e-Glacier National Park lingamakhilomitha ayishumi nanhlanu noma ngaphezulu - idrayivu elula nenhle futhi okumele uyibone. Ukudoba indiza, ukugibela izintaba, ukugibela izikebhe, i-zip line, ukuhamba ngemigwaqo engemuva, ukuhlola idolobha lase-Whitefish kanye/noma i-Bigfork ngokuthenga namagalari - uhambo olumbalwa nje olulindile.
ISanctuary Creek eMeadow Lake iyindawo ekhetheke kakhulu elinde izinkumbulo zakho ezintsha!
Isango eliya e-GLACER PARK
Ibekwe ekhoneni elisenyakatho-mpumalanga ye-Flathead Valley emangalisayo kunomphakathi ozidla ngokwamukela izivakashi zaseMontana nokuzijabulisa komndeni okungafani nezinye…Columbia Falls.
Njengoba usendaweni emaphakathi nemizuzu nje ukusuka eGlacier National Park, Flathead Lake, inqwaba yezindawo zegalofu, kanye neWhitefish Mountain Ski Resort, uzothola izinto ezikhangayo unyaka wonke, izindawo zokuhlala, kanye nokudla okunokunambitheka okuthembekile kwe-Montana nenani.
Akukhona nje kuphela ukuthi i-Columbia Falls “Isango Eliya e-Glacier National Park”, iyindlela eya endleleni ebabazekayo nenhle kakhulu eya e-Glacier National Park e-Camas Creek Park Entrance. I-County Road 486, ebizwa nangokuthi iNorth Fork Road, ilandela iNorth Fork yoMfula iFlathead.
INorth Fork yomfula iFlathead iwumngcele osentshonalanga wepaki futhi iqokwe njengomfula iWild and Scenic. Kungamakhilomitha angaba ngu-20 ukuya eCamas Creek yokungena eGlacier. Amamayela ayisishiyagalolunye okugcina omgwaqo awagandayiwe.
Ziningi izingosi zokungcebeleka kulo mzila we-rustic, ezihlinzeka ngokuqwala izintaba, ukudoba, ukubuka indawo, ukuthwebula izithombe, ukugibela izikebhe/ukugibela i-rafting kanye namathuba okukhempa.
Idolobha lakithi linikeza amathuba akhulayo okuthenga ama-antique kanye nenala yokudla nokuzijabulisa. Izakhamuzi zethu ziyaziqhenya ngokugcina umlingiswa ogxile emndenini “wedolobhana elincane,” okuwumgogodla walo mphakathi.
UBUMNANDI, NGAPHAKATHI NOKUPHUMA
Ngenkathi use-Columbia Falls, wena nomndeni wakho ninga...
- Gubha Izinsuku Zamagugu evikini lokugcina eliphela ngoJulayi nge-Rodeo, iParade, i-Craft Fair, i-Car Show, -
I-Basketball 3-on-3 Tournament kanye ne-5K & 10K Run. UBUMNANDI BOMNDENI!!
- Hamba i-Columbia Mountain
- Igalofu e-Meadow Lake Resort kanye ne-Glacier View Golf Course
- Khetha ama-Huckleberries aqala ngoJulayi nhlangothi zombili ze-Hungry Horse Reservoir
- I-snowmobile kumamayela angaphezu kuka-80 wemizila elungisiwe ngeCanyon Creek Trailhead
- Lalela Amakhonsathi Angaphandle Ehlobo eMaranette Park
- Thatha izingane uziyise e-Pinewood Family Aquatic Center enamachibi okubhukuda aqhudelanayo angaphandle kanye nedamu lokungcebeleka
- Yenza i-splash at the waterslide & mini golf recreation complex
ubusuku obungu-7 e- Columbia Falls
Living in Big Sky Country and enjoying the breathtaking scenery Montana has to offer.
U-Annie, umphathi wendawo uzokunikeza usizo ngaphambi, ngesikhathi, nangemva kokuhlala kwakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Columbia Falls namaphethelo